Tammy Tkach द्वारा - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
पवित्रता अनुग्रह को एक कार्य हो जसको माध्यम बाट भगवान येशू ख्रीष्ट को धार्मिकता र पवित्रता बिश्वास गर्ने लाई श्रेय दिन्छन् र उहाँलाई यसमा समावेश गर्दछ। पवित्रता येशू ख्रीष्ट मा विश्वास को माध्यम बाट अनुभव गरीन्छ र मानिसहरुमा पवित्र आत्मा को उपस्थिति को माध्यम बाट प्रभावित हुन्छ। (रोमी ::११; १ यूहन्ना १: -6,11-;; रोमी ::२२; २ थेस्सलोनिकी २:१३; गलाती ५: २२-२३) संक्षिप्त अक्सफोर्ड डिक्शनरी अनुसार पवित्रीकरणको अर्थ "अलग राख्नु वा राख्नु" हो। केहि पवित्र ", वा" सफाई वा पाप बाट छुटकारा। "1 यी परिभाषाहरु यस तथ्य को प्रतिबिम्बित गर्दछ कि बाइबल" पवित्र "शब्द दुई तरिका मा प्रयोग गर्दछ: नैतिक व्यवहार - विचार र…
Tammy TKach द्वारा लेख
"भगवानले मेरो प्रार्थना किन सुन्नुहुन्न?", म सधैं आफैंलाई भन्छु यसको राम्रो कारण हुनु पर्छ। हुनसक्छ मैले उसको इच्छा अनुसार प्रार्थना गरेन जुन उत्तरको प्रार्थनाको बाइबलीय आवश्यकता हो। हुनसक्छ मेरो जीवनमा अझै पापहरू छन् जुन मैले पछुताएको छैन। मलाई थाहा छ यदि म ख्रीष्ट र उहाँको वचनमा सधैं रहन्छु भने मेरा प्रार्थनाहरूको जवाफ दिइन सक्छ। हुनसक्छ यो विश्वासको प्रश्न हो। जब म प्रार्थना गर्दछु यो मलाई केहि सोध्नु पर्ने हुन्छ भने, तर मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिन लायक छ कि भनेर मलाई शंका लाग्छ। विश्वासमा ल an्गार नभएको प्रार्थनाहरूको जवाफ परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्न। म विश्वास गर्दछु, तर कहिलेकाहिँ मर्कूस :9,24: २ in मा बुबाको जस्तै महसुस गर्दछु जसले असाध्यै हप्काए, "म विश्वास गर्दछु; मेरो अविश्वासलाई मद्दत गर्नुहोस्! ”तर प्रार्थना सुन्न नसक्ने प्रार्थनाको सब भन्दा महत्वपूर्ण कारण यो हो कि मैले उनलाई गहिरो रूपमा चिन्न सिक्नु पर्छ।
लाजरसको मृत्यु हुँदा उनको दिदी मार्था र मरियमले येशूलाई लाजरस बिरामी भएको खबर सुनाए। त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यस रोगले मृत्युमा पु .्याउँदैन, तर यसले परमेश्वरको महिमा गर्छ भनेर बतायो। उसले बेथानीसम्म पुग्नु भन्दा पहिले दुई दिन पर्ख्यो। यस बीच, लाजरस पहिले नै थियो ...
जब येशू आफैले र परमेश्वरका मार्गहरू सिकाउनुहुन्थ्यो, उहाँले सबै कुरालाई नयाँ परिप्रेक्ष्य दिनुभयो। उनले उनीहरूलाई उत्तम मार्ग देखाए, व्यवस्थाको आत्माको बाटो, होइन कि चिठी (व्यवस्था)। उसले उनीहरूलाई न्यायको र हिसाबमा भन्दा प्रेमको मार्ग देखायो। उनले उनीहरू (र हामी) लाई अझ राम्रो तरीकाले ल्याए।
तर उनले मुक्ति पाउने बाटोमा कुनै सम्झौता गरेनन्। कानूनको अयोग्यताको बारेमा उनका धेरै कथाहरूले संकेत गरे कि त्यहाँ केहि चीजहरूको बारेमा जानको लागि मात्र एक मात्र मार्ग छ। मुक्तिको लागि बाटो येशू एक्लै - र केवल येशूमार्फत हुनुहुन्छ। "म बाटो, सत्य र जीवन हुँ," उनले यूहन्ना १:: in मा भने। कि संग उनले यस बारे मा कुनै शंका छोडे ...